Iindaba ezimnandi; Amanqanaba okuqala eSuper Mario Run ayakuba simahla | Iindaba zeGajethi
Nge-15 kaDisemba, le kulindeleke ukuba ifike ngokusemthethweni kwintengiso Super Mario Run, Umdlalo omtsha weNintendo kwizixhobo eziphathwayo, ngeli xesha ziya kufumaneka kuphela okomzuzwana kwi-iPhone ne-iPad. Sele sibonile ukuba kuyakuba njani ukudlala ngomtywini odumileyo kumdlalo wakhe omtsha kwaye njengoko kusungulwa kusondela sifunda iinkcukacha ezintsha malunga nomdlalo.
Le yokugqibela iye yazisa ukuba Amanqanaba okuqala eSuper Mario Run aya kuba simahla kuwo nawuphi na umsebenzisi, ukuba uyifake kwisixhobo sakho, kwaye unonxibelelwano oluyimfuneko kuthungelwano lwenethiwekhi.
Okwangoku asazi ukuba mangaphi amanqanaba aya kuba mnandi ngaphandle kokuya ngebhokisi, kodwa ngokuqinisekileyo ziindaba ezilungileyo kuye nawuphi na umsebenzisi. Kwaye oku kuyasivumela ukuba sivavanye umdlalo kwaye ke sivavanye ukubanakho ukuhlawula i-9.99 ye-euro ukuba umdlalo opheleleyo uya kufaneleka, xa kungekho siqinisekiso kuba bobabini iNintendo kunye neApple betyhile kuphela ixabiso lomdlalo ngeedola, thina Khawufane ucinge ukuba yeyiphi efanayo kwi-euro.
Okokugqibela kufuneka sikuxelele Umdlalo awuzukuthenga ngaphakathi kwaye ukuba senza intlawulo ye-9.99 euro, siya kuba nakho ukufikelela kumdlalo opheleleyo ngaphandle kwezithintelo.
Ngaba sele usenzile isigqibo sokuba uza kuyithenga iSuper Mario Run nge-15 kaDisemba xa ivula kwiVenkile yeApp?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Iindaba ezimnandi; Amanqanaba okuqala eSuper Mario Run aya kuba simahla
UJohammer J1, isithuthuthu kunye nebhetri yasekhaya ngaxeshanye